TMDb: 8.2/10 1700 votes
Marvel’s The Punisher(2019)Season 2
The Rising of the Shield Hero (2022) Season2 ဆယ်ကျော်သက်ကျောင်းသားIwatani Naofumiဟာအပြိုင်စကြဝဠာကိုအခြားလူ၃ယောက်နဲ့အတူသူရဲကောင်းတွေဖြစ်လာဖို့အတွက် ဆင့်ခေါ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်သူတို့လေးယောက်စလုံးဟာသက်ဆိုင်ရာဒဏ္ဍာရီဝင်လက်နက်တစ်ခုစီကိုရရှိခဲ့ပြီးIwatani Naofumiကတော့ဒိုင်းကာကိုလက်နက်အနေနဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်အပြင်လောကရဲ့အတွေ့အကြုံနည်းပါးမှုနဲ့သြဇာကင်းမဲ့မှုတို့ကြောင့်သူရဲကောင်း၄ယောက်ထဲမှာ အားအနည်းဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်အစ၃ရက်မှာတင်သစ္စာဖောက်ခံရ၊မှားပြီးအစွပ်စွဲခံရတဲ့အပြင်ပစ္စည်းလုတာပါခံခဲ့ရပြီးဘုရင်ကအစ ကျွန်အဆုံးရဲ့မသတီခြင်းကိုပါခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုကိစ္စတွေကြောင့်Iwatani Naofumiအတွက်တော့လက်စားချေလိုစိတ်နဲ့အမုန်းတရားကလွဲပြီးမရှိတော့ပါဘူးသူရဲ့အပြိုင်ကမ္ဘာစွန့်စားခန်းကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုကြည့်နိုင်ပါပြီ(ဘာသာပြန်ပေးထားတာတော့ DrNyanပဲဖြစ်ပါတယ်) File Size – 300MB / [email protected] – 1080p / 720pDuration – 24 minute (@Episode)Total Episodes: 13Episode Subtitle – Myanmar HardsubFormat – Mp4Genre : Animation, Action & Adventure, Sci-Fi & Fantasy, DramaTranslator – Dr NyanEncoder – YK For VIP Member - Click Here! (720p) Episode1 - Yoteshin / Userdrive / Meagup / DropGalaxy / Streamsb Episode2- Yoteshin / Userdrive / ...
TMDb: 8.9/10 802 votes
The Rising of the Shield Hero (2022) Season2
Russian Doll – Season 01 Russian Doll - Season 01=================IMDb Rating - 7.8/10ယခု CM ကနေ တင်ဆက်ပေးမယ့် Drama/ Comedy စီးရီးလေးဟာ 2019 ခုနှစ်က ထွက်ရှိထားတဲ့ စီးရီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး မကြာခင်လည်း Season2ထွက်ရှိမှာဖြစ်လို့ Season 1 ကို ဦးစွာတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဇာတ်ဆောင်မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ Natasha Lyoone ဟာ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲအတွက် စာရေးဆရာနဲ့ ဒါရိုက်တာပိုင်းမှာ ကိုယ်တိုင်ပါ၀င်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစီးရီးထဲမှာတော့ သူဟာ နာဒီယာလို့ ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ ။ ဆော့ဖ်ဝဲ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘ၀ကို အလေးအနက်မထား ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ ဖြတ်သန်းနေသူတစ်ယောက် ၊ အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး တွေမှာလည်း အယုံအကြည်မရှိတဲ့သူပေါ့ ။ ဒီလိုလူတစ်ယောက်ဆီကို စကြာ၀ဠာကြီးက လမ်းကြောင်းပြန်တည့်မတ်ပေးဖို့ ဖြစ်လာတဲ့အခါ နာဒီယာတစ်ယောက် သူ့ရဲ့မွေးနေ့ပွဲညတစ်ညမှာ မမျှော်လင့်ထားတာတွေ ဖြစ်လာရတော့မယ် အလေးအနက် မထားချင်လည်း ထားရမယ့် ကိစ္စတွေ ရှိလာရတော့မယ်။ ဖြစ်ပုံက နာဒီယာဟာ သေလိုက် ရှင်လိုက်နဲ့ တူညီတဲ့မွေးနေ့ပွဲညကိုပဲ ထပ်တလဲလဲဖြတ်သန်းနေရတာပါပဲ ။ ပေါ့ပျက်ပျက်မိန်းမသား နာဒီယာ တစ်ယောက် ...
Russian Doll – Season 01
Dickinson (2019) Dickinson (2019) IMDB 7.6 / Rotten Tomatoes 92%မင်းသမီးလှလှလေးနဲ့ဇာတ်လမ်းလှလှလေး ကဗျာလှလှလေးတွေကို ဘာသာပြန်လှလှလေးတွေက တင်ဆက်ပေးထားလိုက်ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့အချစ်တော်လေး Hailee Steinfeld နဲ့ မင်းသမီးချော Ella Hunt တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Dickinson series လေးကို တောင်းဆိုကြလွန်းလို့ ကိုယ်ထင်ပြပေးလိုက်ပါပြီဗျာ။ Apple Tv+ က ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုများစွာလည်း ရရှိထားပါတယ်။Emily Elizabeth Dickinson ဆိုတဲ့ ထူးချွန်ထက်မြက်သော ကဗျာဆရာမအကြောင်းကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာဆရာမဆိုပေမဲ့ ထိုခေတ်ထိုအခါက အမျိုးသမီးများကို စာပေလောကမှ ဖယ်ကျဉ်မှုများကြောင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေခြင်းတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ Emily ဟာ သူ့ဘဝအချိန်အတော်အများကို တစ်ကိုယ်တည်းသီးသန့်ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီး သေဆုံးခါနီးအချိန်မှာတော့ အခန်းထဲကတောင် မထွက်တော့ပါဘူးတဲ့။ သူသေဆုံးပြီးနောက်မှာမှ ကဗျာအပုဒ်ရေပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်လောက်ကို အိမ်အကူရဲ့ အဝတ်သေတ္တာထဲမှာ တွေ့ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကဗျာအများစုဟာ ခေါင်းစဉ်မရှိဘဲ သာမန်ရိုးကျ ကဗျာစည်းမျဉ်းဘောင်ထဲမှ သွေဖယ်နေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကဗျာတွေထဲမှာ သေခြင်းတရား၊ ထာဝရရှင်သန်ခြင်းနဲ့ ...
TMDb: 8.7/10 619 votes
Top Boy – Season 01 Top Boy - Season 01====================== IMDb Rating - 8.4/10ဒီနေ့အတွက် Netflix ကနေပြတဲ့ Series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Top Boy ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဥ◌်းလေးပြောရရင် Jamie တစ်ယောက် အရင်မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူ တူရကီကောင်တွေရဲ့ အဆမတန်စျေးတင်မှုကြောင့် Supplier အသစ် ဖြစ်သူ Dushan နဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ Dushan ကလည်းနယ်နယ်ရရတော့ မဟုတ်ပါဘူး သူကမူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်တဲ့နေရာမှာ အကောင်ကြီးကြီး တစ်ကောင်ပါ။ ဒီလိုနဲ့ Jamieနဲ့ Dushan တို့ကြား ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ရေး ဂိုဏ်းတွေကြားပြဿနာများကို အသားပေး ရိုက်ကူးထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ Crime, Drama, Thriller ကားကောင်း ကြိုက်သူများအတွက်တော့ တစ်ဝကြီးကြည့်ရမယ့် စီးရီးတစ်ခုပါပဲ။ နောက်ပြီးတော့ Rating အားဖြင့်လည်း 8.4/10 ရရှိထားတာမို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ စုစုပေါင်း(၁၀)ပိုင်း ပါဝင်ပြီး တစ်ထိုင်တည်းအားရပါးရကြည့်နိုင်အောင် တစ်ပြိုင်တည်း တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။(ဒီစီးရီးရဲ့ အညွှန်းကို Shwe Pyae မှရေးသားပေးပြီး၊ ဘာသာပြန်ရေးသား ပေးသူများကတော့ CM Team မှဖြစ်ပါတယ်။)File Size - (800 ...
TMDb: 8.4/10 20000 votes
Top Boy – Season 01
The Secret Life of My Secretary(2019) The Secret Life of My Secretary(2019) ဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်း*****************************************************အပိုင်း (၉ မှ ၁၆ ) ထိ(အစ/အဆုံး ရပါပြီ) Mobile Media Company တစ်ခုရဲ့ CEO ရာထူးကို မဲပေးရွေးချယ်ကြဖို့ အချိန်ကျခါနီးမှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရဲ့တူဖြစ်သူဟာ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတာကြောင့် မဲအများဆုံးရနိုင်ခြေရှိနေပါတယ်,,,သူ့ရဲ့ထူးခြားမှုကတော့ အတွင်းရေးမှူးတစ်ယောက်ကို တစ်နှစ်ထက်ပိုပြီးထားခြင်းမရှိတာပါပဲ ....ဘာမဆိုသည်းခံပြီး အလုပ်အရမ်းကြိုးစားတဲ့ အတွင်းရေးမှူးမလေးကတော့အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်နေပေမယ့်လည်း တစ်နှစ်တာစာချုပ်ပြည့်ပြီးတာနဲ့အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက် ပြဿနာသွားရှာဖို့ အရက်မူးပြီးအလာမှာ လုပ်ကြံခံရလုနီးနီးဖြစ်နေတဲ့သူ့သူဌေးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်...မတော်တဆမှုကြောင့် ဦးခေါင်းဒဏ်ရသွားပြီး မျက်နှာတွေကိုမမှတ်မိနိုင်တော့ဘဲကူကယ်ရာမဲ့နေချိန်မှာ သူအလုပ်ဖြုတ်လိုက်တဲ့ အတွင်းရေးမှူးမလေးကိုသာ မှတ်မိတော့တဲ့အခါ.... Episodes: 16Quality : WEB-DL 1080p,720pFile Size: 1.3 GB & 450MBGenres:Drama ,Romance, ComedyTranslated by EiPhyu Khin, Hnin Pale, Lwin Lwin Aung , Hnin Wut Ye & ...
The Secret Life of My Secretary(2019)
Be Melodramatic (2019) Be Melodramatic(2019) ==============================ကိုရီယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲ ဒရာမာအပြည့်နဲ့ အတော်သားနားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ကျွန်တော်အပါအ၀င် အတော်များများ သဘောကျကြတယ်မဟုတ်လား။ဥပမာ- Reply Seriesပေါ့။ အဲ့ဒီ Vibeမျိုးလို့ ဆိုလို့ရတယ်။ Personallyအရတော့ Reply တို့ Hospital Playlist တို့ What Happens to my family တို့နဲ့ မတိမ်းမယိမ်းလောက် သဘောကျတယ်။သို့ပေမဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက သူတို့လို ချစ်စရာ ကောင်းတာတွေနဲ့ပဲ ဖွဲ့စည်းထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ ၈၀%လောက်က အရှိတရားတွေ။ အရှိတရားဆိုတာက ..... နေ့စဉ်ဘ၀က... သမီးရည်းစားဆက်ဆံရေးတွေက.. ကျန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေက.. အရှိတရားတွေကို ဆိုလိုတာ။ကျန်တဲ့20%က ရုပ်ရှင်နာမည်အတိုင်းပေါ့။ ဒါကလည်း တကယ့်အရှိမှာလည်း ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်နေတတ်ဖို့ လိုတဲ့အခါတွေ ရှိတဲ့အကြောင်းပါပဲ။Genreက Rom-Com ဆိုတော့ ထက်၀က်နီးပါးကတော့ အရမ်းမဟုတ်ပေမဲ့ တခြား K Rom-Comတွေလို ရယ်ရတယ်။ ပြောရရင် Replyရဲ့ ရယ်ရခြင်းမျိူးပေါ့။ စာရေးဆရာမကလည်း Replyကို Inspiration ယူထားပုံပါပဲ ခဏခဏကို ထည့်ပြောတယ်။နောက် လောင်ရတာမျိုးကိုလည်း ပြတယ်။ လောင်ရတာဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ဘ၀နဲ့ကင်းကွာတဲ့ အကြီးကြီးတွေနဲ့ လျှောက်လောင်တာ တော့မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဘ၀တွေလိုပဲ သမီးရည်းစားကိစ္စတွေ အလုပ်အဆင်မပြေမှုတွေ လောကရဲ့ အနိမ့်အမြင့်တွေနဲ့ပဲ လောင်ကြတာ။ ပါးပါးလေးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းတကယ် ကြုံနေရတာတွေနဲ့ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတူနေမှာဆိုတော့ ထိတော့ထိတယ်။ ပြီးကာမှ မလောင်အောင် ...
Best Mistake3(2021) Best Mistake3(2021) ဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်း************************************အပိုင်းသစ် - ၁၆ (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)(အစ-အဆုံး ရပါပြီ) အရှေ့က Season 1+2 ထွက်ရှိခဲ့ပြီး တခဲနက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Webtoon drama ကောင်းလေး ဒီ Season3မှာတော့ uni life ကိုအဓိကရိုက်ကူးထားပြီး Season2မှာ ဂျီဟွန်းဟိုလေး သဝန်တိုခဲ့ရမယ့် ဒီ Season မှာတော့ ယွန်းဒူလေးရဲ့ သဝန်တိုခြင်းစတင်တော့မှာပါအရှေ့ပိုင်းမှာ အဆင်ပြေတဲ့နှစ်ယောက် ရုတ်တရက်ကြီး ယွန်းဒူဘက်က လမ်းခွဲစကားပြောခဲ့ပါတယ် အဲအချိန်မှာပဲ တတိယလူတွေထပ်ပေါ်လာတဲ့အခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ယွန်းဒူကရော ဘာလိုလမ်းခွဲတာလဲ ဟွန်းဟိုကရော လက်လျှော့လိုက်ပြီလား? Season2က အတွဲလေးတွေလည်း ပြန်ပါထားတာမို ဒီတစ်ခါတော့ အတွဲတွေအများကြီးကို ကြည့်ရတော့မှာပါ နောက်ထပ်လူသစ်တွေလည်း ပါသေးလို အဆင်တွေတစ်သိုက်ကြီး ကြည့်ရဦးမှာပါနော် အရမ်းအရမ်းကို ကြည့်ကောင်းလို လုံးဝလုံးဝကို လက်မလွှတ်လိုက်ဖိုပြောချင်ပါတယ် (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်ကတော့ Shoon Thu ...
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Season 2) အညွှန်း -------------------Season2မှာတော့ လူသားစားတယ်လို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ Mugen ရထားကြီးဆီကို မစ်ရှင်လုပ်ဖို့ထွက်လာကြတဲ့ Tanjiro တို့အဖွဲ့ဟာ Flame Hashira ဖြစ်တဲ့ Rengokuနဲ့တွေ့ဆုံပြီး သူတို့အရင်ကတိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိစ္ဆာတွေထက်အဆင့်ပိုမြင့်တဲ့မိစ္ဆာနဲ့တိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် သားကောင်ကို အိပ်မောကျစေပြီးမှ တိုက်ခိုက်တဲ့မိစ္ဆာရဲ့လက်ကနေ Tanjiro တို့တစ်တွေဘယ်လို လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပြီး တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာ.... Note:အဆုံးမဲ့ရထား အခန်း ရဲ့ ပြန်နွှေးတဲ့ အပိုင်းတွေကို ထပ်ပေါင်းထည့်ထားတဲ့ဇတ်ကွက်အသစ်တွေ သီချင်းသစ်တွေနဲ့အတူ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းထုတ်လွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း ၁-၂-၃ ကိုတော့ ဆက်တိုက်ထွက်ရှိထားပြီး အပိုင်း ၄ ကတော့ November7ကျမှထွက်ပါမယ် အဲဒီနောက်ကိုတော့ တစ်ပါတ်တစ်ပိုင်းနှုန်းနဲ့ဆက်လွှင့်ပါမယ်။ Recap အနေနဲ့ စုစုပေါင်း7ပိုင်းထိ ထွက်ရှိမှာဖြစ်ပြီး 8 ပိုင်းမြောက်ကို‌တော့ ဒီဇင်ဘာ5ရက်မှာလွှင့်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နေ့မှာ ထွက်မဲ့အပိုင်းသစ်ကတော့ တစ်နာရီကျော်ကြာ အခန်းသစ် အပိုင်းသစ်နဲ့အနေနဲ့ စထွက်လာမှာဆိုတော့ စောင့်ကြည့်ရတာတန်မှာပါ။ အဲဒီနောက် အပိုင်းသစ်တွေကိုတော့ ဒီဇင်ဘာကနေစပြီး ဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပြီး 2022 ထိရောက်သွားပါမယ်။ စီစင် ၂ အတွက်ကိုတော့ မန်းဂ ထဲက ‘ဆောင်ကြာမြိုင်ဝန်း’ အခန်းကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ File Size ...
TMDb: 8.8/10 2904 votes
Creator Campus (2019) Creator Campus (2019)ဒိတ်တင်းရှိုးဆန်ဆန်တွေကိုမှ ကြည့်ချင်ကြသူများအတွက်ဒီတစ်ခါတော့ တစ်မျိုးလေးထူးခြားတဲ့ Romance နဲ့ Friendship အရော ''Creator Campus''ဆိုတဲ့တီဗီရှိုးလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီပါဝင်သူ Castတွေကလည်း Web dramaနဲ့ အခြားဒရမ်မာတွေမှာဧည့်သည်အဖြစ်...ဇာတ်ပို့အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ကြဖူးတဲ့အသက်ငယ်ငယ် တက္သစ္စ မင်းသား မင်းသမီး ၈ယောက်ဖြစ်ပြီးYoutube ဖန်တီးပုံဖော်သူဖြစ်ဖို့ တစ်နေရာထဲမှာအတူနေ...မစ်ရှင်တွေအမျိုးမျိုးကို ဖြတ်ကျော် သင်ကြားရင်းဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အချောလေး ၈ယောက်ကြားက မျိုးစုံကြိုးခုန်သော ခံစားချက်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့တက်ကြလန်းဆန်းတဲ့သင်တန်းသားဘဝ, ရို့မန့်ခရီးစဉ်လေးကြည့်ရှုရမှာဖြစ်လို့်ဖီးလ်ချင်နေသူများအတွက် ရေငတ်တုန်း သောက်ရမယ့်ရေတွင်းလေးလို ဖြစ်နေမှာအသေအချာမို့ ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါစို့အညွှန်းကိုတော့ Deer က ရေးသားပေးထားပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတာကတော့ CM Variety AM ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။Genre.....Reality, Friendship, Romance Quality….WEB-DL 1080p and 720p File size ... 250MB Format…mp4 Duration….15min Episodes....12 Episodes Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Translator .....CM Variety AM Encoder ..... August VIP Link - Click Here!Episode ...
TMDb: 79/10 198 votes
Love Me Actually (2019) Love me actually (2019)ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး စွဲဆောင်မှုကိုယ်စီနဲ့ လူငယ်လေး ငါးယောက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Love me actually club. သူတို့ငါးယောက်ရဲ့ အဓိကနဲ့ တစ်ခုတည်းသောတာ၀န်က ဖြူစင်သန့်ရှင်းသော အချစ်ကို ရှာဖွေဖို့ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံအနှံ့ လှည့်လည်သွားလာပြီး မျိုးစုံသော single lady လေးများနဲ့ တွေ့ဆုံကာ ဒိတ်ရင်းနဲ့ လင်းလက်လာမယ့် အချစ်ရဲ့ မီးပွားလေးတွေကို လိုက်ရှာကြမယ့် dating show လေးတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ရယ်မောစရာတွေ၊ ချစ်စရာအူကြောင်ကြောင်နိုင်မှုတွေ၊ ရိုမန့်တစ်နဲ့ စွဲဆောင်မှုတွေအပြည့် မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ဘယ်တစ်ယောက်ကတော့ နှလုံးသားထဲက နှိုးစက်လေးကို အသံမြည်စေမလဲဆိုတာကို စောင့်စားကြည့်ရှုရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ့ငါးယောက်ကတော့ - အခု Snow Drop မှာ hot နေတဲ့ မြောက်ပိုင်းသားခွေးပေါက်လေး Kim Min Kyu - Comedian တွေထဲမှာမှ ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Heo Kyung Hwan, - Sweet ဖြစ်တဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ ...
Raising Dion Season 1 +2(2019-2022) Rotten tomatoမှာ 82%အထိရပြီး IMDBမှာ 7.2အထိ ရထားတဲ့Rating မြင့်တဲ့ Seriesလေးတခုဖြစ်လို့ကြည့်ရကျိုးနပ်မယ့်ကားလေး။SuperHero ဇာတ်လမ်းပုံစံတွေ ခေတ်စားလာပြီးနောက်Super Hero တွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ရိုက်လာကြတယ်။များသောအားဖြင့်က အရွယ်ရောက်ပြီး Superheroတွေဖြစ်ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ဆယ်ကျော်သက်နဲ့ Superhero ပေါင်းစပ်ထားတဲ့Genre တွေပါ ခေတ်စားလာတယ်DC ရဲ့ Teen Titansရယ် Marvelရဲ့ Runaway Series တွေက လူသိများတယ်။DC နဲ့ Marvel က မဟုတ်ပဲနဲ့ဆို Jumper Movie ကိုမှSequel ပုံစံမျိုးရိုက်ထားတဲ့ Impulse တို့ရှိတယ်။Superheroဆိုတိုင်း သူရဲကောင်းတွေ မဟုတ်တာကို ပြသွားတဲ့The Boy လိုမျိုး Series တွေ။အဲလိုပုံစံတွေထဲကနေမှ တမျိုးလေးခွဲထွက်လာတဲ့ တကားရှိတယ်။အဲဒါကတော့ အခု ...
Raising Dion Season 1 +2(2019-2022)
Euphoria – Season 01 (2019) အထက်တန်းကျောင်းတွေမှာဆယ်ကျော်သက်တွေကဲကြတာကိုမြင်ဖူးတယ် ဟုတ်!ဒီကားမှာယေဘုယျအားဖြင့်တွေ့ရမှာက ဆေးစွဲနေတဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေရယ်၊လူတိုင်းနဲ့ အိပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေတဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေရယ်ဒါတွေကအဓိကထားပြီးတော့ ပါမယ်။သူကဇာတ်ကြောင်းကိုနောက်ကနေပြန်ပြောပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ပထမဆုံးအပိုင်းပဲရှိသေးတော့ သိပ်တော့ ပြောလို့မရသေးဘူး။ဆေးတစ်ချိန်လုံးကွဲနေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတစ်ယောက်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းကလူတွေအကြောင်းကို ထိုင်ပြောပြနေသလိုပဲ။လိင်ဆက်ဆံခန်းတွေ၊ဆေးသုံးတဲ့အခန်းတွေ၊အခုခတ်ကလေးတွေပြောလေ့ရှိတဲ့အောက်ပိုင်းကမဆင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးစွဲပြီးပြောဆိုထားတဲ့ဒီစီးရီးမှာ ဘဲကြောင့် စိတ်ညစ်နေရတဲ့ကောင်မလေးတွေကိုတွေ့ရမယ်၊အင်တာနက်ခေတ်ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မှားယွင်းတဲ့သုံးစွဲမှုတွေ၊မိဘတွေကြောင့် လမ်းမှားရောက်ခဲ့တဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေ ဒါတွေကိုအစုံရှုမြင်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Translated by Charm Encoded by sithu File Size : (390MB) Quality : AMZN.WEBRip.720p Running Time : 55min Format : Mp4 Genre : Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source : AMZN.WEBRip.DDP5.1 Translated by Charm Encoded by sithuComplete Zip File Yoteshin / VIP Episode 1 - Yoteshinportal / Usersdrive / Megaup / Mega.nz / Upstream.to Episode2- Yoteshinportal ...
Euphoria – Season 01 (2019)
Jung Hae In’s Travel Log (2019) Jung Hae In's Travel Log၂၀၁၉ တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Jung Hae In ရဲ့ ခရီးသွားအစီအစဉ်လေးကို ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်မြောက်ပိုင်းကိုခေါ်သွားမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး နယူးယောက်ကို သွားကြမှာပါတဲ့ဒီရှိုးမှာ Hae In က ပထမဆုံးအကြိမ် producer အဖြစ် ထုတ်လုပ်တင်ဆက်သွားမှာပါProducer ဖြစ်တဲ့အတွက် နေဖို့ စားဖို့ သွားဖို့ ခရီးစဉ်လမ်းကြောင်း အကုန်ဆွဲရပါတယ်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် သူပဲ producer သူပဲ host ဆိုတော့ အရာရာက အသစ်အဆန်းဖြစ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဖြစ်နေပါတော့တယ်Episode 1 မှာဆို တက္ကစီငှားပြီးမှ တက္ကစီဦးလေးကြီးက လိုက်မပို့ဘူးငြင်းလိုက်လို့ ပြန်ဆင်းရတာမျိုး စတဲ့ အလွဲလေးတွေနဲ့လည်း ရယ်နေရဦးမှာပါHae In ကလည်း နယူးယောက်ကို အခုမှ ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်ဖူးတာပါတဲ့။ သူ့ရဲ့ actorသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Lim Hyun Soo, Eun Jong ...
Best Mistake2(2020) Best Mistake2(2020) ဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်း************************************အပိုင်း (၁ မှ ၁၆) + Special Episode (စ/ဆုံး) 2019 မှာ Season 1 ထွက်ရှိထားပြီး အရမ်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားလေး Season2မှာတော့ ယွန်းဒူနဲ့ဟွန်းဟိုတို့ အတွဲတွေဖြစ်သွားခဲ့ပြီး တတိယလူ ပေါ်လာခဲ့ပါတယ် ...တတိယလူကလည်း လုံးဝအဆင်လေးနော် ပြီးတော့ ဂျူဟိုနဲ့ ဆောလ်လေးတို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးလည်း ရှိသေးတယ်။ဒီအပိုင်းမှာတော့ ယွန်းဒူနဲ့ဟွန်းဟို အကြောင်းတင်မကတော့ပဲ တခြားဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကိုပါ သေချာလေးထည့်ရိုက်ပေးထားတာမို့ အတွဲသုံးတွဲကို ကြည့်ရတော့မှာနော် Season3လည်းရှိသေးတာမို့ အရင်ဆုံး ဒါလေးနဲ့ ခံစားလိုက်ကြပါဦး။ (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်ကတော့ Shoon Thu Thu Chain ပဲ ဖြစ်ပါတယ်) Aired: Mar 31, 2020 - May 21, 2020Aired On: ...
Best Mistake (2019) Best Mistake (2019) ဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်း************************************အပိုင်း (၁-၁၅) အစ/အဆုံးကျောပိုးအိတ်အစိမ်းလေး အမြဲလွယ်တတ်လို့ ကိုဘူဂီ (လိပ်ကလေး) လို့ခေါ်ကြတဲ့ ဂင်ယွန်းဒူတစ်ယောက် သူ့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောပြီး လိုက်နှောင့်ယှက်နေတဲ့ အလယ်တန်းတုန်းက ကျောင်းနေဘက် ဟောဂျင်းဆူရဲ့ ရန်ကကာကွယ်ဖို့ရာ ချစ်သူရှိယောင်ဆောင်ပြီး ကောင်လေးတစ်ယောက်ပုံကို သူ့အကောင့်မှာတင်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ အဲကောင်လေးက သူ့ရဲ့ကျောင်းက နာမည်ကြီး ဂျီဟွန်းဟို ရဲ့ပုံ ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော့ ... ယွန်းဒူတစ်ယောက် ဟွန်းဟိုကို ပြန်တောင်းပန်တဲ့အနေနဲ့ ပေါင်မုန့်အဝယ်တော်လုပ်ပေးရာကနေ ဟွန်းဟိုက ယွန်းဒူအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ ဟွန်းဟိုရဲ့သူငယ်ချင်း ဂျူဟိုကပါ ယွန်းဒူကို ​ကြိုက်နေတဲ့အခါမှာတော့ ... သူတို့သုံးယောက်ကြား ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ? ယွန်းဒူကရော ဘယ်သူ့ကိုရွေးမလဲ? Web drama တွေထဲမှာ မကြည့်မဖြစ် ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားမို့ ဆက်ဆက်ပြည့်ဖို့ အကြံပေးလိုက်ပါတယ် (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်ကတော့ Shoon Thu Thu Chain ပဲ ဖြစ်ပါတယ်) Aired: Jul 25, 2019 ...